प्रेम बानियाँलाई बहिनीको प्रश्न : डिभीको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ६ कार्तिक २०७३, शनिबार ०४:१० |
आदरणीय प्रेम दाजु
कुशल रहि सोही कामना गर्दछु । हामी एक अर्कामा व्यक्तिगत रुपमा अपरिचित छौं । तर जति तपाइँलाई म टेलिभिजनमा देख्थें, मलाई लाग्थ्यो, म हजुरलाई धेरै नजिकबाट चिन्छु । कुशल सन्चारकर्मिको रुपमा, युवा उत्प्रेरकको रुपमा,सचेत र स्वाभिमानी नेपालीको रुपमा । ममा बसेको हजुरको यहि छापले गर्दा नै आज यो पत्र कोर्ने जमर्को गरेकी हुँ ।
हजुरका तस्बिर र आवाजहरुले म मा एउटा तरंग ल्याइदिन्थे र अहिले पनि तरंग ल्याइरहेका छन्, तर फरक कारणले । दाजु ,जब समाजिक र राष्ट्रिय मुद्धाहरुलाई उठाएर हजुरले जुन प्रस्तुती दिनुहुन्थ्यो नि तेतिखेर आउथ्यो ममा तरंग र अथाह उत्साह । तर यतिबेला तरङ्गित बनायो,जब समचार आयो–एउटा स्वाभिमानी ठिटोलाई डिभी चिट्ठाले अमेरिका पलायन बनाइदियो । सञ्चार जगत, जनाताका सुख दुःख र विचारलाई प्रतिबिम्बित गर्ने माध्यम र जसको माध्यमद्वारा हजुरले आफ्नो पहिचान बनाइसक्नुभएको थियो । यो अमुल्य पहिचान , स्वाभिमान सबै त्यो डिभी चिट्ठा अगाडि कति सजिलै मुल्यहीन बन्न पुगेछन् ।
कति समय नै भएको छ र दाजु , हजुरले मेरै गृहजिल्ला गुल्मीको कथालाई पस्किनुभएको जसमा बिदेशिएका युवाहरुको कारण सुनसान बनेको गाउँको व्यथालाई समेट्नुभएको थियो ।
दैनिक विदेशिने हजारौं नेपाली युवाहरुको भिडमा हजुरको पलायन यति चर्चाको विषय बन्नु पक्कै पनि हजुर साधारण मानिस भएर होइन । बाध्यताले बिदेशिएका नेपालीहरुको लागि आशाको दियो, युवा वर्गको लागि उत्प्रेरक, आउँदो पिंढिको लागि मार्गदर्शक र वृद्धवृद्धाहरुको लागि दुख बुझिदिने छोरो–कति भाग्यमानी हजुर । तर अब यी आत्मियपनको औचित्य रहेन सायद ।
नेपालमा गाँस बास कपासको कमि नझेलेका,हजुर जस्तो आफ्नो पहिचान बोकेका मानिसहरु पलायन हुनुपर्ने बाध्यता के हो दाजु ?
नेपालमै केही गर्नुपर्छ,समाज समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर लागि परेका हाम्रो समुहका युवा जस्तै यहाँ कैयौं युवाहरु छन् जसलाई हजुरहरु जस्ता उत्प्रेरना दिने व्यक्तिहरुको पलायनले अल्लमल्ल बनाएको छ ।
जसरी तपाई पलायन हुनु भयो, त्यसरी नै हाम्रो युवा वर्ग पलायन हुदैछ । ती हजुरले उठाएका मुद्धा , कथा र व्यथाहरुको के अर्थ दाजु जब ती कथाहरु अनन्तकालसम्म चलिरहनेछन भने । ती कथाहरु प्रवचन गर्ने मनिस हजुरको बदलामा अर्को आउनेछ र सायद उ पनि देख्न थाल्नेछ डिभी परेको सपना । अनि यो क्रम चलिरहनेछ निरन्तर । आज हजुरलाई म पत्र लेख्दैछु , यसरी नै कोरिनेछन पत्रहरु , लेखक फरक हुनेछन् , पुस्ता फरक हुनेछन र यो पनि चलिरहनेछ निरन्तर ।
हजुरले उठाएका मुद्धा , कथा र व्यथाहरुको के अर्थ दाजु जब ती कथाहरु अनन्तकालसम्म चलिरहनेछन भने । ती कथाहरु प्रवचन गर्ने मनिस हजुरको बदलामा अर्को आउनेछ र सायद उ पनि देख्न थाल्नेछ डिभी परेको सपना । अनि यो क्रम चलिरहनेछ निरन्तर । आज हजुरलाई म पत्र लेख्दैछु , यसरी नै कोरिनेछन पत्रहरु , लेखक फरक हुनेछन् , पुस्ता फरक हुनेछन र यो पनि चलिरहनेछ निरन्तर ।
अहिले तपाई डिभीले सृजना गरिदिएको संसारमा पुगिसक्नुभएको छ । त्यो संसारका लागि तपाईले स्टारडमलाई छोड्नुभयो,राष्ट्रियता,स्वाभिमानसँगै देश र माटोलाई समेत छोड्नुभयो । तपाई आफैंले शंका गर्नुहुन्थ्यो,झण्डालाई डिभी पर्यो भने के हुन्छ ? तर अहिले म तपाईलाई यही प्रश्न गर्दैछु–डिभीको स्वाद कस्तो हुँदो रहेछ दाजु ?
हामी नेपाली धेरै आशावादी हुन्छौं । म पनि आशा गर्छु , हजुरले नेपाललाई बृद्धश्रम जस्तो बुढेशकालको लागि नसाचेर उमेरमै फर्की फेरि उहीँ उत्साह थप्नुहुनेछ । नेपाली माया र गल्ती भएमा क्षमा याचनासंगै पत्र टुंगाउन चाहन्छु ।
उही तपाईकी शुभचिन्तक बहिनी
Previousअब एसएलसीको सट्टा एसईसी परीक्षा हुने
Nextआफूसँग भएको गैरकानूनी हतियार बुझाउन अष्ट्रेलिया सरकारले नागरिकलाई छुट दिने
नयाँ सोच हुनेलाई शक्तिको खाँचो पर्दैन
२७ चैत्र २०७२, शनिबार ०७:१८
धर्मबारे प्रचार होइन शिक्षा दिइयोस्
२२ श्रावण २०७२, शुक्रबार ०४:०४